X-mas….. ခရစ်တော် နဲ့ကျနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » X-mas….. ခရစ်တော် နဲ့ကျနော်
X-mas….. ခရစ်တော် နဲ့ကျနော်
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Dec 25, 2013 in History, My Dear Diary, Short Story | 56 comments
ကျနော်ငယ်စဉ်က နေ့ စဉ်နီးပါး ငိုခဲ့ရတဲ့ အချိန်များမှာ..ကျနော့်မျက်ရည်နဲ့ ငိုကြွေးမှု…၀မ်းနည်းမှုတွေကို ဖြေသိမ့်ပေးနိုင်မယ့် နွေးထွေးသောရင်ငွေ့ မှာ ကျနော်နူးညံ့ခဲ့တယ်..။
ကျနော့်ရဲ့ မတူညီတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စရိုက်ဟာ ကျနော့်မိသားစုစည်းအပြင်မှာဘဲ အထီးကျန်တဲ့ ဘ၀လေးပေါ့..။
ကလေးတစ်ယောက်သွားရမယ့် လမ်းကြောင်းမှာ ကြင်နာမှုတွေ..နွေးထွေးမှုတွေနဲ့ခရစ်တော်က ကျနော့်ကို ကူညီလမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်..
ကြမ်းတမ်းသော နှလုံးသားအကျင့်ကို ကျနော် လက်မခံဘူး…အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့်ဘက်ကလည်း တင်းခံနေတတ်တယ်..။
လမ်းမလေးတခုသာခြားတဲ့ ဘေးအိမ်ကို ခရစ်ယာန်မိသားစု တစ်စု ပြောင်းလာကြတယ်..နာဂလူမျိုးတွေပါ..ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်တယ်..။
အဲဒီအိမ်က အဘိုးနာမည်က ဦးကျော်ဒင်လို့ ခေါ်ပါတယ်..။
ကျနော် ၀မ်းနည်းတဲ့အခါ ငိုကြွေးတဲ့ အခါ အဘိုးဆီကိုသွားတယ်.. ပန်းချီဝါသနာ ပါတဲ့ ကျနော့်ကို အဘိုးက သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ပြတယ်..
ကျမ်းသစ် ကျမ်းဟောင်း၂ပိုင်းထဲမှာ ကျမ်းသစ်ကို ကျနော့် နှလုံးသားက လက်ခံပါတယ်..
ကျနော့်ရဲ့ လေ့ကျင့်မှုက သမ္မာကျမ်းစာထဲက သရုပ်ဖော်ပုံတွေပေါ့..။
ကိုယ့်မျက်လုံးတစ်လုံးဖောက်ရင် သူ့ မျက်လုံးတစ်လုံးဖောက် ဆိုတဲ့ အဆုံးအမပိုင်းတွေကို ကျနော် လက်မခံပေမယ့်
ကျမ်းသစ်ထဲက ခရစ်တော်ရဲ့ …
“ ကိုယ့်ရဲ့ ညာဘက်ပါးကို ရိုက်လာခဲ့ရင် ဘယ်ဘက်ပါးပြင်ကိုပါ လှည့်ပေးလိုက်ပါ” ဆိုတဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ကျနော် နေခဲ့ဘူးတယ်..
ပိုက်ဆံမရှိလို့ ခရစ်တော်ပုံ ပြက္ခဒိန်ဝယ်ဘို့ မတတ်နိုင်တဲ့ …အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို ကျနော်ခရစ်တော်ပုံတစ်ပုံဆွဲပေးခဲ့တယ်..
ညဘက်ကြီးတိတ်တိတ်လေးဆွဲခဲ့ရတာ…ပြီးတော့ လူပုံတူမဟုတ်လို့ဘေးမှာလည်း ထားလို့ မသင့်တော်..ခြေရင်းဘက်လဲ ထောင်ဘို့ မသင့်လို့ခေါင်းရင်းဘက်မှာ ထားရင်း ကျနော်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်..။
မျက်နှာတစ်ခြမ်းလုံး နာကျင်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ နိုးလာတဲ့ခဏ…..
ဘာသာခြား ဘုရားပုံကို ဆွဲရကောင်းလား…..ခေါင်းရင်းဘက်ထားအိပ်ရကောင်းလား…ယုံကြည်မှုပျက်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတဲ့
စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ၅ တန်းကျောင်းသားလေး ကျနော့်ကို တိုင်းမှာကြိုးတုပ်ပြီး အချက်ပေါင်းများစွာ ကျနော့်ကို ၇ိုက်ခဲ့ကြတယ်..
ပါးစပ်က သွေးတွေ စီးကျခဲ့တယ်…
ဘာသာမတူပေမယ့် သူဟောတဲ့ တရားတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘဲ လူတွေကောင်းလာဘို့သွန်သင်ဆုံးမတဲ့သူတော်ကောင်း..
သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံကို ကျနော်ဆွဲတာ…..
ဘာကများ ကမ္ဘာ့လူ့ သားပါတ်ဝန်းကျင်ကို…နစ်နာစေခဲ့လို့ လဲ….
ကျနော် သူတော်ကောင်းတွေကို ချစ်တယ်..
အဖေတို့ သွေးဆာနေတဲ့ နှလုံသားတွေ ကျေနပ်အောင် ရိုက်ကြပါ….
အဖေတို့ လက်တွေ ညောင်းသွားတဲ့အထိပေါ့….
ကျနော့်နှလုံးသားက ရှာဖွေနေတဲ့ အရာ….အဖေတို့ တားလို့ မရပါဘူး…
ကိုယ်တော်အတွက် ကျနော် အနာခံရဲပါတယ်..
ကျနော်နာကျင်မှုတွေက ကိုယ်တော့်ပုံကို လိုချင်တဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ အဘွားအိုအတွက် ပီတိတစ်ခုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်..
ကိုယ်တော်ကျနော့်ကိုသာ ကျနော်လိုချင်တဲ့အရာ…ဆီကို လမ်းပြပေးပါ…။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော် ကျမ်းစာကို ဆက်လက်လေ့လာတယ်..
လမ်းမတစ်ခုသာခြားတဲ့ ကျနော့်အိမ်က ကျမ်းစာထဲက အီစွတ်နဲ့ …ဒီဘက်ခြံက အီစာ တို့ ဟာ…..
သိပ်မကွာကြဘူးး..သံတူကြောင်းကွဲလေးတွေ ဖြစ်နေတဲ့ မှန်း စဉ်းစားမိလာတဲ့အတွက်…
နောက်ဆုံးတော့ ဆုတောင်းတာကို ကျနော် လက်မခံချင်တော့ဘူး ကိုယ်တော်…
ကျေးဇူးပါ ကိုယ်တော်…ကိုယ်တော်ကျနော့်ကို လိမ်မာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်..
ဘိုးကျော်ဒင်ကတစ်ဆင့် သီးခံတတ်အောင် ဆုံးမခဲ့တယ်..
ရဟန်းပြုတဲ့အချိန်တိုင်း ခရစ်တော်ကို ကျနော်မေတ္တာပို့ ပေးပါတယ်..
ကိုယ်တော့်ကို ချစ်ခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို…ဒီကလေး လေး ဘယ်လမ်းကို ရှာနေခဲ့တာလည်း ကိုယ်တော်သိနေခဲ့တယ်..
ကိုယ်တော်က ကလေးတစ်ယောက်ကို မတူညီတဲ့ ကျမ်းစာအုပ် ၂ အုပ်ကို တစ်ပြိုင်နက် ဖတ်စေပြီး မှ..
ဒါဟာ ကျေးဇူးတရားပါ ကိုယ်တော်..
ဟောဒီ ၂၀၁၃ ခရစ်စမတ်မှာ ကိုယ်တော့်ပုံကို ဘ၀မှာ ၄ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်..
ကိုယ်တော့်ပုံကို လိုချင်သူတဲ့ ခရစ်ယာန်အဘွားအိုက နော်ဝေလူမျိုးပါ…
ပြက္ခဒိန်မ၀ယ်နိုင်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ကိုယ်တော်…
သူကနှလုံးသားက လာတဲ့ပုံကို သူက လိုချင်တာတဲ့….
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ်တော့်ကို ကျနော် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ ပြောရင်..
ကျနော့်ကို လူတွေက ရူးနေတယ်လို့ပြောကြမှာပါ ခရစ်တော်…
အဲလို ပြောကြရင်…ကျနော် က စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ဘဲ ပြန်ပြောပြမှာပါ ကိုယ်တော်..
“သင့်ရင်ထဲက သူတော်စင်ကို ရူးမတတ်ချစ်ခဲ့ရင် သင်တို့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်” လို့ ပေါ့..။
ကိုယ့်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားရှင်ကို နှလုံးသားဖြင့် ချစ်နိုင်ကြပါစေ
ကိုယ့်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားရှင်ကို နှလုံးသားဖြင့် မြင်တွေ့ နိုင်ကြပါစေ…
Merry Christmas…. Mon
Merry Christmas to U….
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ ကျမ်းစာ ဖတ်ဖူးတယ်။
တချို့ အယူအဆနဲ့ ဆုံးမ စကားလေးတွေကို မှတ်ထားတတ်တယ်..။
စိန့်.. သူတော်စင်တွေအဆင့်က… ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့.. အရိယာနဲ့တူမယ်…..
ပြောရရင်.. ဂျီးဇက်ခရိုက်စ်က.. ဗုဒ္ဓတပါးဖြစ်မယ်လို့လည်းတွေးမိဖူးပါတယ်..။
သူတရားဟောလို့.. လက်ခံကိုးကွယ်တဲ့.. သူ့နောက်လိုက်တွေက.. ဒီခေတ်ဒီကမ္ဘာမှာကြည့်ရင်ကို.. ဂေါတမဗုဒ္ဓနောက်လိုက်တွေထက်.. အရည်အတွက်များတာပဲ..
ကမ္ဘာမှာ အတော်ဆုံး မားကတ္တင်း အော်ဂနိုင်ဇေးရှင်း ၂ခုပဲရှိတယ်…
တခုက မိုက်ခရိုဆော့ဖ် တခုက ကတ်သလစ်ချာ့ခ်ျ…
ကျွန်တော်က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဟုတ်လို့ စိန့် ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးလဲ သေသေချာချာမသိပါဘူး။ စိန့်ပေါ ၊ စိန့်ဂျွန်၊ စိန့်အော်ဂတ်စတင်း၊ စိန့်ဖလိုး စသဖြင့် ပါ။ အရင်တလောက (ရက်စွဲမမှတ်တော့ပါဘူး) ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကနေ စိန့် သတ်မှတ်ပေးတယ် လို့ ကြားလိုက်မိပါတယ်။ တစ်ခုတွေးမိပါတယ်။ ခရစ်တော် နောက်ပိုင်းမှာ စိန့်တွေကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲပေါ့လေ။
Kai ရဲ့ အတွေးကို တွေ့မိလို့ တွေးကြစေသတည်းဆိုလို့ တွေးရင်းနဲ့ ပြောချင်စိတ်ပေါ်လာတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အရိယာ၎မျိုးရှိပါတယ်။ သောတာပန်၊ သကဒါဂမ်၊ အနာဂမ်၊ ရဟန္တာ ပါ။ တစ်ခုရှိတာက ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူကမှ အရိယာလို့ သတ်မှတ်ပေးလို့မရပါဘူး။ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်လဲ သတ်မှတ်ပေးလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုနဲ့ဘဲ အရိယာအဖြစ်ကို ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိန့် ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ တူ၊ မတူ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
စိန့် ကို အရိယာနဲ့ တူမယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် စိန့်အထက်က Jesus Christ ကို ဗုဒ္ဓနဲ့တူမယ်လို့ တွေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Kai အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓ နဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ သတ်မှတ်ချက်ကို သိမယ်ဆိုရင် Jesus နဲ့ ဗုဒ္ဓ ဟာ ဘယ်လိုမှ မတူဘူးဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဟာ သင်ကြားပြသပေးမဲ့ဆရာမရှိဘဲ မိမ်ိကိုယ်တိုင် ဥာဏ်တော်သုံးပါးကို သိမြင်ပြီး ဗုဒ္ဗအဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jesus မှာ သင်ကြားပြသပေးတဲ့ ထာဝရဘုရားသခင်ရှိပါတယ်။
Kai က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာ ဗုဒ္ဗဘာသာဝင်တွေထက်များတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အဓိက ဘာသာကြီး(၄)မျိုးထဲမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာတွေမှာ အဓိကအကျဆုံး အခြေခံအချက်မှာ တူကြပါတယ်။ အဲဒါက ငါ၊ အသက်ဝိဥာဉ်(Spirit) ၊ လိပ်ပြာကောင် (Soul) အစရှိသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လက်ခံကြပါတယ်။ ငါ၊ ငါ့ကိုယ်၊ ငါပိုင် ဆိုတဲ့ အတ္တအယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ (အတ္တဆိုတာမှာ selfish ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး)
ဗုဒ္ဓရဲ့အယူကတော့ အကြင်ခန္ဓာငါးပါးရှိသည်။ ထိုခန္ဓာငါးပါးသည် ဖြစ်ပြီး ပျက်သည် ဆိုတဲ့ အယူကို ယူပါတယ်။ ငါ၊ သူတစ်ပါး၊ ယောက်ကျား၊ မိန်းမ၊ သတ္တ၀ါ မဟုတ်တဲ့ အနတ္တအယူဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဟာ God မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းပြသူပါ။ လမ်းသုံးလမ်းကို ပြခဲ့ပါတယ်။ ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုခံစားတဲ့ အစွန်းတစ်လမ်း၊ ခန္ဓာကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ကျင့်တဲ့ အစွန်းတစ်လမ်း နဲ့ ဒီအစွန်းနှစ်လမ်းမှ လွတ်ကင်းတဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဦးတည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်က ဘ၀သစ်မဖြစ်စေဖို့ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းသိနေတဲ့ နိဗ္ဗာန်ပါ။ ဘ၀သစ်မဖြစ်အောင် ဒါနဆိုတဲ့ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း၊ သီလဆိုတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဘာဝနာဆိုတဲ့ သမထဘာဝနာ အားထုတ်ခြင်းတို့နဲ့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါန၊ သီလ၊ သမထဘာဝနာ သုံးပါးဟာ သူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့တရားများဖြစ်ပေမဲ့ ဇာတိအသစ်ဖြစ်စေတဲ့ တရားများသာဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဆုချခြင်း၊ ချီးမြှောက်ခြင်း၊ ဒဏ်ခတ်ခြင်း စသည်တို့ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဟာ လမ်းသုံးလမ်းကို ပြခဲ့ပြီး ဒီလမ်းတွေ ရဲ့ အကျိုး အပြစ်တွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လမ်းကိုဘဲ မဖြစ်မနေ လျှောက်ရမယ် (MUST) လို့ မပြောပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘ၀တဏှာကြီးတဲ့ လူသားတွေအတွက် ၀ိပဿနာအားထုတ်ရမှာထက် နေ့ နဲ့ ည ဆိုတဲ့ ကြွက်ဖြူ ကြွက်မဲ ၂ကောင်ကိုက်နေတဲ့ သစ်ကိုင်းပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း အောက်က သေမင်းဆိုတဲ့ နဂါးပါးစပ်ဟပြီး စောင့်နေတာတွေကို ဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲ သစ်ကိုင်းပေါ်က ပျားရည်စက်ကလေးတွေကို လျက်ချင်ကြတာ သဘာဝတရားပါဘဲ။
တိရဏပရိဥာဆိုတဲ့ ဓမ္မဿဝနာ အကျိုးရှိအောင်တရားနာခြင်း၊ အကျိုးရှိအောင် စာဖတ်ခြင်း၊ လေ့လာမှတ်သားခြင်း တို့နဲ့ ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိနားလည်အောင် ပထမလုပ်ရပါတယ်။
နောက် တိရဏပရိဥာဆိုတဲ့ ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကို ဥာဏ်နဲ့မြင်အောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ရပါတယ်။
ေ နောက်ဆုံးမှာ ပဟာနပရိဥာဆိုတဲ့ အားထုတ်လို့ရလာတဲ့ မဂ်ဥာဏ်နဲ့ အရိယာအဆင့်အလိုက် ကိလေသာတရားတွေကို ပယ်ရပါတယ်။
ဒီလို လေ့လာ၊ ကျင့်ကြံ၊ အားထုတ်မှ ရမယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်ကျင့်တရားထိန်း၊ ဘာသာရေးအရ ပြုဖွယ်ရှိတာတွေ နိစ္စဓူဝလုပ်၊ ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားရင်းနဲ့ ဘုရားသခင်နဲ့ တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားတွေကို လူတွေပိုပြီး နှစ်သက်လက်ခံကြတာ သဘာဝတရားပါဘဲ။
ဘာသာတရားယုံကြည်မှုဆိုတာ နှလုံးသားရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံး နေရာမှာရှိပါတယ်။
မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့ မြတ်နိုးတဲ့ ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယုံကြည်နိုင်၊ ပြောဆိုနိုင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခြေခံခြင်းမတူတဲ့ ဘာသာတရားတွေကိုတော့ မနှိုင်းယှဉ်သင့်ဘူလို့ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ။ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရကြပါလိမ့်မယ်။
ဘရာကြော်ပါ ခေါင်၊ခေါင်ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိကြရင် ဘာသာအမည်တွေဟာ အရေးမပါတော့ပါဘူး။
Bravo ပါ၊ Aye Lwin Oo
ခုလို ချက်ကျလက်ကျ ဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့ အတွက် လေးစားပါတယ်။အခုတလော သဂျီးတယောက် ရွာငြိမ်နေလို့ ဆွနေတယ်။
လူသုံများတာ တခုတည်းနဲ့ ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းလို့ ပြောမရသလို
နောက်လိုက်အရေအတွက်ကို ကြည့်ပြီး ဒီဘာသာကောင်းတယ်လို့ ပြောမရတာ သိသိကြီးနဲ့ ဆွပေးနှိုက်ယူလုပ်နေပါတယ်။
မမမာ သိသားနဲ့ ……။
ကျနော့်ပို့ စ်အတွက် အခုလို မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ ကွန်မန့် အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..။
သူကြီးခိုင်အနေနဲ့ ကလည်း သူတွေးမိတဲ့ထောင့်က ပြောတယ်ဆိုပေမယ့် ..ဒါကို ..ကိုအေးလွင်က သေချာလေးရှင်းလင်းထားတော့ ကျနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
တခါတလေ ကျနော်တို့ တောင် လည်..လည် သွားခဲ့ဘူးပါတယ်..
ဒါပေမယ့် သေချာနှိုင်းယှဉ်တွေးတောမှ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိမြင်လာရတာခဲ့တာပါ..။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ယှဉ်ပြ ပြောပြသွားတာကို လေးစားမိပါတယ်…
ဘယ့်နှယ့် ရှိစ ဒဂျီး..
ကုန်းဘောင်ခေတ်မှာလား မသိဘူး.. ဘုန်းကြီးကျောင်းသားနဲ့ လူကပ်တယောက် သာသနာ ငါးထောင် ဟုတ်လား မဟုတ်လား ငြင်းခုံရန်ဖြစ်ရင်း ဘုန်းကြီးဆီရောက်သွားတော့ ဆရာတော်က သူ့တပည့်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကို ဆော်ပလော်တီးတယ်။ ကျောင်းသားက သူမမှန်လို့လားမေးတော့ လူကောင်းဆို အရူးနဲ့ ဖက်ပြိုင်မဖြစ်ရဘူး၊ ဒါကြောင့်နင့်ကို နောင် အရူးနဲ့ ရန်မဖြစ်အောင် ရိုက်တာလို့ ပြောကြောင်း ဖတ်ဖူးတယ်။ အခုလည်း မာမွတ်လျှာပွတ်နဲ့ ဖက်ပြိုင်ဖြစ်သူ နောင်ဂျီးကိုဗဲ အပြစ်တင်ဂျင်ဒေါ့သာဗဲ…
ရွာထဲ သန်းခေါင်စာရင်းပြောင်းဖို့ အခုမှ ပုံစံ၁၀ ထုတ်မလို့လုပ်တုံး ဆိုတော့
မှားမိပါတယ်။ ငယ်သူမို့ မသိပါ။
နာနာလေးရိုက်ပြီး အဆုံးထိ မ လိုက်ပါဗျာ . . . .
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျနော်လည်း ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာ ရေရေလည်လည် ထောက်ခံတယ်။ အမှန်တော့ ကိုအေးလွင်ဦးရဲ့ ကွန်မန့်ဟာ တော်တော်ကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သဂျီးကို အဲဒီလို သွားရှင်းပြနေတာ ကျနော် တော်တော် အံ့သြမိတယ်။ ကျောက်ခဲကို အရေညှစ်တယ် ဆိုတာများ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သဂျီးက ဒီလို လေကုန်ခံပြီး ရှင်းပြတာထက် သူမဟုတ်တာ လုပ်တာလေးတွေကို ပြောပြီး တီးပေးမှ သူက ကြိုက်တာ။
ပြောရတာ အားတော့ နာနာပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် ပြောရဦးမယ်။
ကဲ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့ရေ သဂျီးဦးခိုင်ရဲ့ အပေါ်က ကွန်မန့်ကလေးကို နောက်တခေါက် ထပ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါ။ ဖတ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ စာရွက်ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်က စည်းကမ်းချက် စာကလေးကို ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သဂျီးကိုယ်တိုင် ရေးထားတာပါ။ စည်းကမ်းချက် ၆ က “လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှု ဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ” တဲ့။ သူက အဲဒီစည်းကမ်းကလေးကို အနက်ရောင်တောင် ချယ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြီးရင်တော့ သူပြောတဲ့ ကွန်မန့်ကလေးကို ထပ်သာ ဖတ်ကြည့်ပါတော့။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ရန်ဖြစ်ရမယ့် သဘောပါပဲ။ မူရင်း ဆောင်းပါးရှင်လည်း ဒီသဘောမျိုးကို သူ့ဆောင်းပါးမှာ အရိပ်အမြွက်တောင် မရေးပဲနဲ့ ဒီလို ကွန်မန့်မျိုး လာရေးတာ တော်တော် အံ့ညြမိပါတယ်။
အဲဒီလို သူထုတ်တဲ့ စည်းကမ်းကို သူတိတိကျကျ လိုက်နာတဲ့ သဂျီးပါ။ ပြီးရင် သူကပဲ ရွာသူရွာသားတွေကို စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့ ဦးအောင် ပြောတတ်ပါတယ်။ အံ့ဖွယ်သုတပါပဲ။
ဆိုတော့… “စိန့်”အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချက်တချို့ကို.. ၀ိကီကဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်..။
ဒါပေမယ့်… ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုတွေကို.. လွှတ်ချပြီးမှဆက်ပြောလို့ရမယ်လို့… ထင်မိတာပါပဲ..။
အနည်းဆုံးတော့.. ကိုယ်ဟာလေးကမှမှန်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေး.. လွှတ်ချရမယ်ထင်မိတယ်…
ခရစ်စမတ်အထိမ်းအမှတ်နဲ့.. တီဗီချာနယ်တွေမှာ.. ဂျီးဇက်ခရိုက်စအကြောင်းတွေချည်းပြနေတာမှ.. စီအန်အန်က.. After Jesus ကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့.. ထေရ၀ါဒကို.. ချိန်ထိုးကြည့်မိပါရဲ့..။
A saint is one who has been recognized for having an exceptional degree of holiness, sanctity, and virtue. While the English term “saint” originated in Christianity, historians of religion now use the term “inamore general way to refer to the state of special holiness that many religions attribute to certain people,” with the Jewish Tzadik, the Islamic wali, the Hindu rishi or guru, and the Buddhist arhat or bodhisattva also referred to as saints. Depending on the religion, saints are recognized either through official church recognition or by popular acclaim (see Folk saints).
In Christianity, “saint” hasawide variety of meanings, depending on its usage and the denomination. The original Christian usage referred to any believer who is “in Christ” and in whom Christ dwells, whether in heaven or in earth. In Orthodox and Catholic teachings, all Christians in heaven are considered to be saints, but some are considered to be worthy of higher honor, emulation, or veneration, with official church recognition given to some saints through canonization or glorification.
ကျနော် အလေးအနက်တစ်ခု ပြောချင်တယ်ဗျ..
ကျနော်ရေးတာဘဲဖြစ်ဖြစ်…သူတစ်ပါးရေးတဲ့ပို့ စ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပို့ စ်မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုလေးလောက်
အတွက်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ..စာတစ်ကြောင်းလောက်အတွက်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုခိုင်က သေသေချာချာကို စာပေ အထောက်အထားနဲ့ချပြ ရှင်းပြတတ်တယ်..
ဘယ်အကြောင်းအရာမျိုးအတွက်မဆိုပါ…ကျနော် မန်းဂေဇက် အဖွဲ့ဝင် မဖြစ်ခင်ကတည်းက ခိုင်ဆိုတာ သူကြီးမှန်း မသိခင်ကတည်းကပါ..။ တော်တော်လေး သတိထားမိတယ်..။
သူကြီးဆိုတဲ့ ရာထူးနဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတာ စာပေအမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် တော်တော့်ကို ကောင်းတာပါ..။
တစ်ကယ်လို့သူကြီးက အယ်ဒီတာချုပ် (သို့ ) စာတည်းချုပ် တစ်ယောက်ဆိုရင် ( သူကြီးက မန်းဂေဇက်မှာ
ဘာရာထူးလဲ ကျနော် မသိပါ) တာဝန်ကျေပါတယ်..။
သူကြီးနဲ့ အယ်ဒီတာကို ခွဲပြီး မကြည့်လိုက်ရင် သူကြီးက အကုန်ဂွတိုက်ရေးနေတယ်လို့ထင်ကုန်ကြရော…
သူကြီးမှာ သိပ်အားကောင်းတဲ့ လေ့လာမှု ဗဟုသုတရှိတယ်..
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာက အမြင်မတူကြဘူး သူကြီးရဲ့ ….
ကျနော်က ဒီပို့ စ်လေးကို ရိုးရိုးလေး သတိထားပြီးရေးလိုက်တာပါ…
ဘာသာရေး အကြောင်းနဲ့ နွယ်နေလို့ ပါ..
သူကြီး အမြင်နဲ့ အယူအဆကို ဆက်ရေးနိုင်ပါတယ်..
ကျနော့် ပို့ စ် အတွက်နဲ့ အတင်းကြီး အမုန်းခံကြီး မဖြစ်ပါစေနဲ့ .. အားနာလို့ ပါ..။
အချိန်အခါအရ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲနေကြတယ်..
လူဆိုတာ အမှန်စစ်စစ်ကို မတွေ့ သေးခင်ထိတော့ ကိုယ်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အရာကို အစစ်ထင်တတတ်ကြပါတယ်..။
ှမလွှတ်ခင်ကတဲက ချထားပြီးသားပါ Kai.
ှOfficial Recognized Saint နဲ့ Folk saints or popular saints တို့ရဲ့အကြောင်းကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အချေအတင် ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုလို့ သူတစ်ပါးအပေါ်တင်ပြီးတော့လဲ မဆွေးနွေးလိုပါဘူး။ မိမိဖက်ကလဲ ချေပပြီး မဆွေးနွေးချင်ပါဘူး။
မိလိန္ဒပဥှာမှာ ရှင်နာဂသိန်ကနေ မိလိန္ဒမင်းကြီးကို ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့လို ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးပါ့မယ် လို့ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း
ပညာရှိရှိ၊ မရှိရှိ . . . သူတော်ကောင်းတွေလို သူတစ်ပါးသိတာတွေက မိမိအတွက် မှတ်သားစရာဖြစ်စေ၊ မိမိသိတာတွေလဲ သူတစ်ပါးအတွက် မှတ်သားစရာဖြစ်စေ ဆိုတဲ့ စေတနာရယ်၊ မေတ္တာရယ် ကို အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ သိသလောက်၊ မှတ်မိသလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။
Kai က ကျွန်တော်ပြောတာ အကုန်သဘောမပေါက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှင်းပြတာ မရှင်းမလင်းဖြစ်သလိုဘဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘယ်သူဟာ အရိယာလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ကျင့်ကြံရင်း မဂ်ဆိုက်၊ ဖိုလ်ဆိုက်ဖြစ်တာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဘဲသိတာပါ။ ငါ အရိယာဖြစ်ပြီ၊ ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီ လို့လဲ ဘယ်သူမှ ထုတ်မပြောခဲ့ကြပါဘူး Saint ကိုတော့ Church ကနေ သတ်မှတ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။
Kai ဆွဲထုတ်ပြတဲ့ Wiki မှာ Saint ဟာ Arhat (အရဟတ္တမဂ်၊ ရဟန္တာ) ဒါမှမဟုတ် bodhisattvaဗောဓိသတ္တ(ဘုရားအလောာင်း၊ မဟာယာနအယူအဆ) နဲ့ တူညီနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက သတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ၊ Kai သိရင် မှတ်သားရအောင် ပြောပြပါလား။ Request ပါ။
ခရစ်တော်အရင် ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓက ငါ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ်ငါးရာလောက်နေရင် Jesus Christ ဆိုတဲ့ ခရစ်တော် ပေါ်လာမယ်။ သူ့အဆုံးအမတွေကို လိုက်နာပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြလို့ Saint အဖြစ် သတ်မှတ်ခံကြရတဲ့ သူတော်စင်တွေဟာ ငါဘုရားသာသနာမှာရှိတဲ့ ရဟန္တာတွေ၊ (ဘုရားအလောင်း ဗောဓိသတ္တတွေ) နဲ့တူမယ် လို့ တခါမှ မပြောခဲ့ဘူး ထင်ပါတယ်။ ပြောပြခဲ့ဘူးရင်လဲ ထောက်ပြပါ။
ခရစ်တော်ကလဲ ငါ့ရဲ့အဆုံးအမကို လိုက်နာပြီး Saint သတ်မှတ်ခံရတဲ့ သူတော်စင်တွေဟာ ငါ့အရင် ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဟိန္ဒူဂုရုတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန္တာတွေနဲ့ တူတယ် လို့များ ပြောခဲ့သလား ကျွန်တော်မသိပါ။ ပြောသံတော့ တစ်ခါမှ မကြားမိတာ အမှန်ပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓ နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Jesus တို့က ပြောတာမဟုတ်ဘဲ တခြားသူတွေက ပြောတာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒါကို အနုမာနမှန်းဆချက် (Hypothesis) လို့ဘဲ ပြောပါမယ်။ Hypothesis ဟာ Proven Truth မဟုတ်ဘူးဆိုတာ Kai သိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာ ပင်လယ်ရေငံနဲ့ အင်းအိုင်မြစ်ချောင်းက ရေချိုလိုပါဘဲ။ ရေချင်းတူပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံချင်းမတူကြပါဘူး။ ရေငံနဲ့ ရေချိုကို ဂုဏ်သတ္တိချင်း (boiling point, freezing point, specific gravity etc) ဘာက ဘာနဲ့ တူသလောက်ရှိမယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ရေငံကငါးဟာ ရေငံမှာပျော်ဖို့နဲ့ ရေချိုကငါးဟာ ရေချိုမှာပျော်ဖို့ပါဘဲ။
အတ္တ နဲ့ အနတ္တ ဆိုတဲ့ ဘယ်လိုမှမတူတဲ့ အခြေခံခြင်းကွဲပြားနေတဲ့ ဘာသာ၂ခုဟာ အဆုံးအမနဲ့ ကျင့်ကြံ အားထုတ်တဲ့ ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်ချင်းလဲ ဘယ်လိုမှ မတူပါဘူး။ ရရှိကြတဲ့ လွတ်မြောက်ပုံချင်းလဲ လုံးဝမတူပါဘူး။ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာက ဘယ်လိုမှ မတူတာကို ဘယ်ဟာနဲ့ ဘယ်ဟာက တူမယ် လို့ ပြောတာထက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေက ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီး ဂရုဏာအောက်မှာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော် Heaven ကိုရောက်အောင် အားထုတ်ကြဖို့လိုသလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းအတိုင်း သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရာကို မျက်မှောက်ပြုဖို့ အားထုတ်ကြဖို့ပါဘဲ ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ပါ။
Personal ခံစားချက်ပါ Kai ။
ဒါပေမယ့် သူကြီးစဉ်းစားမိသလိုတော့ အကုန်လုံးမဟုတ်သေးဘူးသူကြီး..
ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ..အခုပို့ စ်လေးက စကားတစ်ခွန်းနည်းနည်းလေးတိမ်းတာနဲ့ …သတိထား၇လိမ့်မယ်..။
ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာပဲ တွေ့ဖူးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဦးခေါင်ဆီမှာ တွေ့ရတယ်..
ဒီလိုအောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာကိုလည်း အားကျမိတယ်..
ဦးခေါင်ရော ကိုအေးလွင်ဦးကိုပါ အထူးလေးစားမိပါကြောင်း..
ပြန်လာလည်ရင် လာတွေ့ မယ်..မပူနဲ့ ..
စိတ်ထဲကတော့ ခင်ပြီးသားပါ..လူချင်းသာ မတွေ့ ဘူးကြတာလေ…။
ဆုံတဲ့အခါ စကားတွေ ပြောကြတာပေါ့..။
ကိုယ့်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားရှင်ကို နှလုံးသားဖြင့် ချစ်နိုင်ကြပါစေ . . .
. . . . . ဆိုတဲ့ စကားစု၂ခု အတွက် တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ကိုခေါင်လဲ ဘုရားသခင်ရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ဂရုဏာတော်ကို အစဉ်အမြဲ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားနိုင်ပါစေ။
အဲဒီစကားလေး ၂ ခုက တစ်ကယ့် စေတနာစိတ်လေးနဲ့ရေးခဲ့တာပါ…
ကျနော်လည်း ဗုဒ္ဓရှင်တော် အဆုံးအမ ဂရုဏာနဲ့အေးချမ်းနေခဲ့တာကြာလှပေါ့…
ကိုခေါင်ဆီမှာ ပန်းချီသင်တန်း လာတက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်။
ကိုအေးလွင်ဦး ရွာထဲရောက်လာတာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ရွာက ခုတလော မန့်တဲ့လူနည်းနေလို့ ပျင်းစရာကြီး။
ဘာသာတရားနဲ့ လူမှုရေးတွဲလိုက်မှ မှားသွားတာလို့ မထင်ဘူးလား။ ဘာသာတရားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပိုအနှစ်သာရ ရှိပေမယ့် ဥပမာ ဗုဒ္ဓဘာသာသီလရှင်နဲ့ ကက်သလစ်သီလရှင် ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။
တွေ့ ဆုံတဲ့အခါ ပန်းချီသင်ပေးမယ်…
ဟို မျှစ်ကြော်ပြောတဲ့ သီလရှင်…
ဒါပေမယ့် ကွာတာက နောက်ကပံ့ပိုးမှုခြင်းမတူဘူး…
လူကြားသူကြား နေထိုင်သွားလာပုံကြောင့် ယှဉ်တွေးမိဘူးတယ်..မျှစ်ကြော်..။
ကိုယ့်ဇာတ်ကို မနိုင်သေးလို့… ငြိမ်နေတာ..
အဖိုး က သူ့သားသမီး ၅ ယောက်ကို ဆူတာ သွားသတိရတယ်။
“နင့်တို့ဟာက ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ မေတ္တာ၊ မုဒိတာ၊ မေတ္တာ ၊ဂရုဏာ ၊ဥပေက္ခာ စတဲ့ ဗြဟ္မာစို တရား (၄) ပါးလည်း မရှိ”
“နင်တို့ အမေ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ သည်းခံခြင်းနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားလည်း မရှိ”
“ရေ လက်ကြားးးး၊ လူ ကပြားတွေ” တွေတဲ့။
သူ ပြောလို့ မနိုင်တိုင်း ဆူတာ။
၅ ယောက်လုံး အကျင့်စရိုက်တွေသာမတူတယ်။
ဒေါသကြီးပြီး သည်းမခံတတ်တာ လက်စားချေတတ်တာတွေက တူတူပဲ။
ဟိုလေ သာမီး ကတော့ အဲလိုဟုတ်ဘူးနော် ခေါင်။
ကေ က “ရေလက်ကြား…မှာ နေတာမှ မဟုတ်တာ….. ကျွန်းမှာနေတာ ……ဟုတ်တယ်ဟုတ်း)
ပျံလာယင် ဒီအကျောင်း ပျောပျဘာအုံးခည ..
ကြာတော့ ကိုမင်းသားပို့စ်မှာလာမန့်ရမှာတောင်လန့်လာတယ်… မြင်းထိန်းငတာလိုများဖြစ်နေမလားမသိ….
လူဆိုတာ ပညာအဆင့်အတန်းမတူရင် ရှိန်လာတာမျိုးကလား …..ကျော်များကြီး ကြိုးစားဖို့လိုပါသေးတယ်.. ။ ကိုမင်းသား ရှိနေတာ လူငယ်တွေအတွက် အတုယူစရာဖြစ်ပါတယ် ။
အချင်းချင်း တစိမ်းဆန်တာတွေ မပြောရဘူးလေ…။
အမှန်ဆို စတွေးတုန်းက “ပြောရဦးမယ် ဆောရိုးရေ ”ဆိုပြီး ရေးဘို့စဉ်းစားတာ…နောက်…အဲလို ဆိုရင်
တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကို ရည်ရွယ်သလို ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်လို့တွေးပြီး…
ဒီပုံစံနဲ့ ဘဲ ရေးဖြစ်သွားတာပါ…
အတွေ့ အကြုံဆိုတာ ရပ်တည်ရတဲ့ ဘ၀၊ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့်ပါ။
ဒါပေမယ့် အကို့ ရင်ထဲက စေတနာက ခရစ်စမတ်မှာ ပို့ စ်တခုရေးချင်တယ်..
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို ယခုချစ်နိုင်တာထက် ခရစ်တော်ကို ပိုချစ်စေချင်တယ်…။
တစ်ချို့ က နုတ်ခမ်းဖျားလေးနဲ့ ဘဲ ချစ်နေကြတယ်..
ဘုရားကျောင်းတွေက ဖိတ်ရင် အကို သွားတယ်…
ကော်ဖီခွက်ပေါ်က မျက်လုံး…ကိတ်မုန့် ပန်းကန်မှာ ၀ဲနေတဲ့ မျက်လုံး…
ကားစင်ပေါ်မှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ယေရှုအတွက် ဂရုဏာမျက်လုံး အကို ရှာမတွေ့ ဘူး…
ခရစ်တော်က လူသားရဲ့ အမှားတွေ အတွက် အပြစ်ခံပေးတာ ..တို့ က အေးဆေးဘဲ..
လို့တွေးတတ်သူတွေကို အကို တော်တော် စိတ်ဆိုးမိတယ်..။
ကိုယ့်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာကို နှလုံးသားနဲ့ချစ်စေချင်တယ်..
နှလုံးသားနဲ့မြင်စေချင်တယ်…
ဒါလေးပါဘဲ ဆောရိုး ရယ်..
အကို့ မှာ မြင်း မရှိပါဘူး ဆောရိုးရယ်…
ဥရောပမှာ မြင်းက ကားထက်ဈေးကြီးတယ်..။
ဆရာခေါင်က နှလုံးသားရှိလျင် ဘုရားရှင်ကို တွေ့နိုင်တယ် ပြောတော့ ပိုထူးအောင် နည်းနည်းပိုကွန့် ပါရစေ။ ဘုရားကို နှလုံးသား မရှိတဲ့အခါ မြင်တွေ့ယုံမက ခံစားသိမြင် နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ နှလုံးသား ရှိနေသ၍ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ညဏ်တထွာတမိုက် သီလသမာဓိ တပိုင်းတစနဲ့ ပုံဖော်ပူဇော်နေတာမို့ အစစ်ကို တွေ့နိုင်ခဲတယ်။ နှလုံးသားမရှိတော့မှ (နှလုံး အစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် စက်ပဲဖြစ်ဖြစ် မရှိလျင် သေပြီမို့၊ မသေဘူး အသက်လျင်လျက်ပဲဆိုလျင် အဲဒီလူသည် နှလုံးသား မရှိလို့ ပြောလို့ရမယ်) ဖုံးအုပ်နေတဲ့ တိသလ္လာတွေ ကင်းပပြီး ဘုရားဂုဏ်တော်အစစ်ကို တွေ့နိုင်ကောင်းပါမည်။
သီလရှင်အကြောင်း တွေးမိသလောက်လေး ပြောပြချင်ပါတယ်။
သီလရှင်(၄)မျိုးရှိတယ်လို့ မှတ်သားဘူးပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကပြောတာပါ။ အသက်ကြီးသွားလို့မှတ်ဥာဏ်မကောင်း တော့ဘူးဆိုတော့ ဘွဲ့နံမည်မပြောနိုင်တာပါ နော်။
၁။ သီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေ တစ်ကျောင်း၊ ချောင်တစ်ချောင်ကနေ တစ်ချောင် လျှောက်လည်ပြီး အလေလိုက်နေတဲ့ သီလရှင် က မယ်သီလေ တဲ့။
၂။ ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါ လောဘကြီးလို့ သူများထက်ဦးအောင် ရှေ့ဆုံးက ပြာယာ ပြာယာ နဲ့ အတင်း အလှုခံတတ်တဲ့ သီလရှင်ကို တော့ မယ်သီလော တဲ့။
၃။ ကျောင်းမှာဘဲနေနေ၊ ဘယ်နေရာသွားသွား အနားရှိသမျှ လူယောက်ကျား၊ လူမိန်းမ၊ သီလရှင်တကာတို့နဲ့ ကက်ကက်လန် ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့၊ အားလုံးအော့ကြောလန်တဲ့ မယ်သီလန် တဲ့။
၄။ ဆွမ်းခံလို့ရတတ်သမျှကို သံဃာတော်များနဲ့ အတူနေ သီလရှင်များကို တတ်နိုင်သမျှ လှု၊ သီလကို အမြဲတန်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆောက်တည်၊ စာသင် စာချ အလုပ်ကို စွမ်းသမျှလုပ်၊ ရဟန်းရှင်လူ အားလုံးတို့ကို မေတ္တာနဲ့ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ မယ်သီလှ တဲ့။
ရွာသူ၊ ရွာသားတွေလဲ ဒီသီလရှင် (၄)မျိုးလုံးကို တွေ့ဘူးကြမှာပါ။
သီလရှင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ သီလစောင့်ထိန်းပြီး သာသနာကို စွမ်းနိုင်သမျှစောင့်ရှောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးများဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တုံးက ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ အမျိုးသား ဖိုးသူတော်များနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ကိုရင်အဆင့်မဟုတ်ပါဘူး။
သီလရှင်(၄)မျိုးမှာ သာသနာကို အမှန်တကယ်စောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ မယ်သီလှရှင်တွေလဲ အများကြီးရှိကြပါတယ်။ ကုသိုလ် ဖြစ်ကြောင်း(ပုညကိရိယာဝတ္ထု)၁၀ပါးထဲမှာ အပစာယန ဆိုတဲ့ မိမိထက် အသက်၊ သိက္ခာ၊ ဂုဏ်ဝါကြီးသူတို့ကို (မျှော်လင့်ချက် မထားဘဲ) ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း၊ အလေးအမြတ်ပြုခြင်း၊ အမြတ်တနိုးပူဇော်ခြင်း ဆိုတာ တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လူသာမာန်ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ ငါးပါးသီလကိုတောင် လုံအောင်ထိန်းဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ကို ခက်ခဲလွန်းလှ ပါတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ စာသင်စာချ ဆိုတဲ့ ပရိယတ္တိသာသနာကို စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သာသနာ့ဝေယျာဝေစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း စတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေကြတဲ့ မယ်သီလရှင်များကိုတော့ အလေးအမြတ်ပြုသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အသက်ကြီးရင် လေရှည်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်မလားမသိဘူး။ အစလေးတစ်ခုတွေ့မိရင် တွေးမိသမျှ ပြောချင်လာတယ်။ ဗျစ်ဗျစ် တောက်တောက် တော့မဟုတ်လောက်ပါဘူး နော်။
ဒါနဆိုတဲ့ စွန့်ကြဲမှုလုပ်ဖို့ အလှုခံပုဂ္ဂိုလ်လိုပါတယ်။ အလှုခံပုဂ္ဂိုလ် ၁၄ မျိုးရှိပါတယ်။ အလှုခံတစ်ကျိပ်လေး ခွေးတောင်ပါသေး ဆိုတဲ့ စာချိုးလေးတွေ့ဘူးပါတယ်။ အလှုခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အတုဖြစ်ဖြစ်၊ အစစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ စင်ကြယ်သည်ဖြစ်ဖြစ်၊ မစင်ကြယ်သည် ဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလှုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရလို့ လှုချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ လှုလိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်၊ မကြည်ညိုစရာတွေ့လို့ မဲ့လိုက်မိရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်ပါဘဲ။
သူများကိုကြည့်တာ အကုသိုလ်က အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လှတာမြင်ရင်လိုချင်တယ်(လောဘ)၊ မဲမဲညစ်ညစ် ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီး တွေ့ရင် မကြိုက်ဘူး(ဒေါသ)၊ ကိုယ်နဲ့ပြေပြေလည်လည်မဖြစ်ရင် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားတာ၊ ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတဲ့(မာန)၊ ကိုယ့်အိမ်ဘေးက သိန်း၅၀လောက် ၃လုံးပေါက်တယ်ဆိုရင် ကျလိ ကျလိ နဲ့ မနာလို(အိပ်သာ ကို ပါဌ်ဆင့်ရေးမရဘူး ဖြစ်နေလို့၊ ဆောရီး)၊ မန္တလေးမှာ သံဃာတော်များတန်းစီဆွမ်းခံကြွတာကို မြင်ရတဲ့အခါကြတော့ ကြည်နူး(ပီတိ) အစရှိသဖြင့် ခံစားရသမျှအားလုံးနီးပါးဟာ အကုသိုလ်တွေချည်းများပါတယ်။
ဒါ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သရွေ့ . . . မယ်သီတွေ လေလေ၊ လောလော၊ လန်လန် သူတို့ကို မကြည့်ဘဲ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ကြည့်တာ သာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရကြပါလိမ့်မယ်။
ပြောရရင်… မိန်းမတွေကို.. နှိမ်ချတဲ့.. ကွန်ဆာဗေးတစ်စိတ်ဓါတ်က.. အဲဒီမှာလာပေါ်တယ်ထင်မိတာပဲ..။
.. ဂေါတမဗုဒ္ဓခွင့်ပြုတော်မူထားတာကို… ဗမာဘုန်းဘုန်းတွေက.. ငြင်းပယ်ရတယ်လို့ပေါ့နော..။
သီရိလင်္ကာမှာတော့.. ရဟန်းမိန်းမ(ဘိက္ခူနီမ) ဖြစ်ခွင့်..ရပ်တည်ခွင့်ပြုကြောင်း…
“ နှုတ်သီးရယ်စွာ၊ ( ပုတ်) ကြီး အာတာတာ နှင့် ဖာမယ်သီလ ၊
အကျင့်ရယ်တန် မသင့်တာ အမြင်သန်လို့ ၊ နင့် အကြံ ၀သီဆိုးတယ်၊
( ယိုး ) လိုက်ချင်လှ ”
အမှတ်မမှားရင်.. သီရိလင်္ကာမှာ.. ဘိက္ခုနီလုပ်နေတဲ့.. ဗမာတယောက်က.. မြန်မာပြည်မှာ..ဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံ လာတက်တာ.. မဟနထောင်တာနဲ့.. (အဲဒီခေတ်ကစစ်အစိုးရက) ဖမ်းထောင်ချပစ်သဗျ…
အဲဒီရဟန်းမရဲ့အကိုက.. စစ်တပ်ကဗိုလ်မှုးကြီးဖြစ်နေလို့.. ခဏပဲချပြီး.. ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်မှတ်ဖူးတယ်…
သီလရှင် တစ်ချို့ က ၀မ်းရေးနဲ့ နေထိုင်ရပ်တည်မှုက ခက်ခဲပါတယ်..တစ်ချို့ က လောဘစိတ်ကပိုနေတော့ အနေအထိုင်က လေးစားစရာ မဖြစ်ပါဘူး.. အဲဒီမှာ အားလုံး သော သိလရှင်တွေပါ ထိခိုက်တာပါဘဲ..။
သီလရှင်မို့ ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ခွဲခြား နှိမ့်ချတာကိုတော့ ကျနော် မကြိုက်ပါဘူး…။
ခရစ်ယာန် သီလရှင်လေးတွေကျတော့ စားစရာ နေစရာ ပညာရေး ပူပင်စရာမလိုပါဘူး…။
အဲဒီ အခြေခံ အချက် ကွာဟမှုက လူအမြင်မှာ ကြီးမားတဲ့ အမြင်ကွာဟမှု ဖြစ်နေတာပေါ့..။
တောင်ပေါ် တောရ ကျောင်းလေးမှာ…ကျနော်နဲ့ ခင်တဲ့ သီလရှင်က စေတီဘုရားတည်တော့…
တောင်လယ် တော၇ကျောင်းက ကျောင်းထိုင်ကိုယ်တော်က ဒေါသတွေဖြစ်ပြီး အမနာပ ပြောတာကြား၇တော့
ကိုယ့်မှာ ပြုံးရခက်ခက်.. မနေနိုင်လို့ …
“ ကိုယ်တော်ကလည်း….ကိုယ်လည်းသူ့ လို လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေါ့” လို့ ပြောတော့…
“ ဒကာကြီးက သီလရှင်လူလား…. ကျုပ်လူလား ” တဲ့..။
သူကြီးပြောတဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ကြီးက တောရကျောင်းမှာတောင် မလွတ်ဘူး..။
ပေါက်ကရတွေးမိတာကို ဆက်ရရင်… သာသနာမှာတောင် မိန်းကလေးက အနှိမ်ခံရသလားလို့…
ဒီနေ့မှ သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်သော ကိုရင်ဖြစ်ပါစေ..ဘိက္ခူနီက ကန်တော့ရတယ် ဆိုတာလေ..
နည်းနည်းတော့ကြာပြီ… အိမ်နားက မုန့်ဆိုင်မှာ မုန့်ဝင်ဝယ်တော့… ကိုယ်က ဒီဘက်မှာ မုန့်ကြည့်နေတာ… သတိမထားမိဘူး..ဆိုင်ရှင်က ပြောတယ်..
“တွေ့လား… တစ်ဆယ်တန်ကိုမြင်တော့ ချက်ချင်းကို ထွက်သွားတော့တာပဲ” တဲ့..
“ဒါ သီလရှင် အလှူခံချိန်မှမဟုတ်တာ… အလှူကျလာခံတယ်..တစ်ဆယ်တန်ကိုမြင်တော့ကျ ထွက်သွားတယ်” တဲ့..
သူတို့အသံတွေကြားတော့မှ အာရုံစိုက်မိတယ်…ရင်ထဲမှာ တကယ်မကောင်းဘူး… တစ်ဆယ်တန်ဆိုတာ သကြားလုံးတစ်လုံးတောင် ဝယ်စားလို့မရပါဘူး.. မလှူချင်ရင် ကန်တော့ဆွမ်းပါလို့ ငြင်းလို့ရပါတယ်..အခုက တစ်ဆယ်တန်တဲ့…
သာသနာကို ခုတုံးလုပ်တာ သီလရှင်မှ မဟုတ်ပါဘူး… ရဟန်းတုတွေလည်း အများကြီးပါပဲ.. ဒီထဲကမှ သီလရှင်အစစ်တွေတောင် အနှိမ်ခံရတယ်..အမေက ပြောဖူးတယ်… လောကီကို စိတ်ကုန်လို့ သီလရှင်ဝတ်ရင်တောင် ငြိမ်းအေးမယ် မထင်နဲ့တဲ့… ဘာကွာတာလဲ.. “ဘုန်း” လား.. ဘာလဲ… နားမလည်ဘူး… သာသနာ့ဘောင်မှာတောင် မိန်းကလေးက အနှိမ်ခံပဲလား..
(အယူတိမ်းနေရင်လည်း လမ်းပြပေးကြပါ..စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကို မကောင်းလို့ပါ..)
ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ဘဲ ထပ်ပြောရဦးမှာပါ ကိုအေးလွင်ဦး
တစ်ခု ပြောရင် တစ်ခု မှတ်သားရပါတယ်..
တစ်ခု မက ပိုပြီး ပြောရင် ပိုပြီး မှတ်သားရပါတယ်..
ဗဟုသုတလဲရသလို အသိပညာလဲ ပိုတိုးပါတယ်..။
သူကြီးရော ကိုအေးလွင်ဦးရော… ၂ယောက်လုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်..။
kai ကို reply လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုခေါင်နဲ့ (ကို) San Hla Gyi တို့ရဲ့ Comment တက်လာတာ မတွေ့လိုက်မိပါဘူး။ Submit လုပ်ပြီးမှ တွေ့လိုက်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဆရာကြောင်က သတိပေးထားတာလဲ ရှိပါသေးတယ်။
အရိပ်အကဲပြလို့မှ သဘောမပေါက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုအတွက် ရှက်မိပါတယ်။
Kai ကလဲ လွှတ်ချလိုက်ပါလို့ ပြောပါတယ်။
လွှတ်ချလိုက်ပါတယ် ကိုခေါင်။ လုံးဝလွှတ်ချလိုက်ပါတယ်။
အခု ကွန်မန့် ကို ဖတ်ရမှ ကျနော် တစ်ကယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါ..။
ရှက်စရာ မလိုသလို လွှတ်ချစရာလဲ မလိုပါဘူးလေ..။
အယူအဆ မတူတာတစ်ခုကို ငြင်းရင်း…ပြောရင်း
ကိုယ်ယူဆထားတဲ့ အမှန်တရားတခုကို လွယ်ကူစွာ လွှတ်ချမယ်ဆိုရင်..
ကျနော် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး အကိုရဲ့ ..။
သူကြီးနဲ့ အကိုနဲ့ က ကျနော့်ပို့ စ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးမှ အယူအဆ တစ်ခုကို ပြောကြရေးကြတာ..ဆိုတော့
သူနဲ့ အယူအဆ မတူပေမယ့် ကျနော့်အတွက်က မှတ်သားစရာတွေ…
ကျနော့်နည်းတူ…လေ့လာချင်တဲ့ လူငယ်တွေ အတွက် မှတ်သားစရာတွေပါ..။
အကို့ စိတ်ထဲမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင် ကျနော်က တောင်းပန်ပါတယ်..။
သူကြီးနဲ့ ကျနော်က မရင်းနှီးပေမယ့် သူက ဒီလိုဘဲ…
ကိုစံလှကြီးတို့ နဲ့ မှ သူက ပြောမနာ ဆိုမနာဗျ..
ကိုအေးလွင်ဦးက အသစ်တယောက်အနေနဲ့ခုမှ ၀င်လာကာဘဲ ရှိသေး …စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်သါားရင် ကျနော်က ကြားကနေ တောင်းပန်ပါတယ်..။
….. နောက်လဲ လာပါ..မျှဝေပေးပါ..။
ဘာကိုမှ သင်ခန်းစာ ရလိုက်တယ်လို့မတွေးပါနဲ့ ..
ဘာကိုမှ လွှတ်မချပါနဲ့ …။ ရှက်စရာလဲ မလိုပါဘူး…။
ကျနော့် မိသားစုနဲ့ ကခုထိ ကျနော် ငြင်းခုန်နေတုန်းပါဘဲ…
ကျနော့် အဖေက ကျောင်းက ဂေါပက လူကြီး…
ဘယ်လောက်ဘဲ ငြင်းငြင်း ကျနော်က လွှတ်မချဘူး…။
သူကြီး လွှတ်ချ ခိုင်းလို့ သာ လွှတ်ချရမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီဆိုက်မှာ ရေးနေတဲ့လူတွေ…ကုန်းကောက်စရာတောင် မရှိဖြစ်နေကြမှာ….။
ကျနော့်ကိုဘဲ သွန်သင် ပြောပြပေးပါ..။
ကျုပ်က.. ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ.. စာတည်းချုပ်လုပ်ပါတယ်..
ကျုပ်ရေးတာတွေက.. ဘာသာ၂ခုကြားထိပါးရိပါးတွေမပါပဲ.. အချက်အလက်ကိုယူပြီး တိုက်ဆိုင်ပြနေတာလို့.. စိတ်ရင်းရှိကြောင်း… အာမခံပါတယ်..။
တချိန်ချိန်မယ်… ရေချိန်ညှိကြတဲ့အခါ… အရေးပါလာနိုင်ပါတယ်..။
ထပ်ကွန့်ဆွေးနွေးလိုက်ရရင်.. လူသားမှာ.. အရိယာဆိုတာမျိုးဖြစ်တည်မှုက.. ဗုဒ္ဓဘာသာကသတ်မှတ်ထားတာမှမဟုတ်တာနော..
လူုသားကို … .. အဆင့်တွေခွဲရင်.. ” သောတာပန်၊ သကဒါဂမ်၊ အနာဂမ်၊ ရဟန္တာ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓာ၊ ဗုဒ္ဓ ” တွေက.. လူသားတိုင်းမှာဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်..
ပိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆို.. ကိုယ်တိုင်ပို့စ်တခုတင်စေလိုကြောင်းနဲ့..အဲဒီမှာ.. ဆက်ဆွေးနွေးလို…
ဆြာခေါင်က စွယ်စုံလို့ပြောရမလား ဘက်စုံလို့ပြောရမလား ပါရမီရှင်လို့ပြောရမလား အောင်မယ်လေး လန့်တောင်လာပြီ။ သာမန်တော့ဟုတ်ဖူးထင်ဘာ့ အပြင်မှာတွေ့ဖူးချင်လိုက်တာ
အပြင်မှာ တွေ့ ဖူးချင်ရင် ရွှေပုပ္ပါးသွေးဆေးဆောင်ထားနော်…
အနော်က ကြောင်းစရာဂျီး….. ဟီးဟီး။ လန့် မှာတော့ သေချာတယ်… လူချောတွေ့ ဘူလား ။
နာမည်ကြီးမင်းသားပဲဟာ ချောမှာတော့အသေချာပဲ တွေ့ဖူးချင်ဘာတယ်။
ဟိုအပေါ်ကွန်မန့် တွေမှာ ဆက်ရေးလို့ မရလို့ဒီမှာဘဲ ရေးလိုက်ပါတယ်..
သူကြီးက စာတည်းချုပ်ကိုး……။ ထင်တော့ ထင်သားဘဲ..။
ကျနော်က တော့ သူကြီးဝင်ရှုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးဗျ…
သူကြီးမြင်တဲ့ ထောင့်ကနေ ထောက်ပြပေးတယ်..လိုအပ်ရင် လင့်ခ်ပါ ချိတ်ထားပေးတယ်..
ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာကိုလည်း လက်ခံပါတယ်..။
ဆြာခေါင်ရေ အကြောင်းသိချင်းပေမည့် မန့်ရမှာ လက်တောင်မရဲဘူး…
စွယ်စုံ ဆြာခေါင်ဆိုတာ ကျောက်စ်နဲ့ သိတယ်လို့ ပြောရတာ ဂုဏ်ရှိသဗျာ…
နောက်ပြီး အပေါ်က ဆြာတွေ ချေချက်ကလည်း ရှင်းကနဲပဲ…
ကိုခေါင့် ရဲ့ ပို့စ် ရော ပန်းချီ ကားလေးရော
ဖတ်ရှု မှတ်သားစရာ အပြည့်နဲ့ မို့ တကယ်သဘောကျမိတယ်
ငယ်ငယ်က ကရင်မသူငယ်ချင်းလေးတောင် သတိရမိတယ်
ပထမ ဒက်ဒီခေါင့် ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်
ဆက် ဆင်းလာတော့ သဂျီးနဲ့ ကိုအေးလွင်ဦးနဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ဆက်ဖတ်
အဲဒီမှာ ဦးစံလှကြီးပါ ပါလာတော့ ပွဲက ထပ် မြိုင်သွားရော
အယ်….ငါ ဗဟုသုတ အတော်ရသွားသဟ
ကိုကျော်စွာခေါင်ရဲ့ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး သဂျီးနဲ့ ကိုအေးလွင်ဦးတို့ကော်မန်းတွေဖတ်ရတာ
အရမ်းကောင်း ဗဟုသုတလဲရပါတယ် ချက်နဲ့လက်နဲ့ ဒါကြောင့် သခင်ယေရူးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး
သခင်ယေရူးကို တချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန္တာတစ်ပါရယ်လို့ယူဆခဲ့သလို..အစ္စလာမ်ဘာသာကလဲ
တကယ်တော့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုခရစ်ယန် ရောအစ္စလာမ်ဘာသာနှစ်ခုစလုံးကလက်ခံထားတဲ့
ကျမ်းစာပါ ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်ယင် ကလက်စားချေတဲ့တရားကိုအချေခံထားတဲ့ကျမ်းပါ..
ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့တရာတွေဟာရန်ကိုရန်ချင်မတုံ့ပြန်ရဘူးဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေနဲ့တူညီလာတာကြောင့် သခင်ယေရူကို ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူဘူးတဲ့
အစ္စလာမ်ဘာကျတော့ သခင်ယေရူကို သူတို့ရဲ့တမန်တော်အီဆာရယ်လို့လက်ခံထားပါတယ်
သခင်ယေရူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကပ်အသတ်ခံရမဲ့အချိန်မှာ ဘုရားသခင်ကလူစားလည်းပြီး
ခေါ်ယူသွားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် နောက် အိန္ဒိယာပြည်နယ်ကက်ရှမီယာပြည်နယ်မှာ
ဒါကြောင့်လဲ သခင်ယေရူဟာ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာတော့အမှတ်ပါဘဲ……..
ဟောဒီ ၂၀၁၃ ရဲ့ ခရစ်စမတ် ပို့ စ်တစ်ခုဟာ အမှတ်တယပို့ စ် အဖြစ် မန်းဂေဇက်နဲ့ ကျနော့်ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းသတိယနေမှာပါ ကိုရင်မောင်…
အခု ကိုရင်မောင်ရဲ့ကွန်မန့် လေးက ကျနော်စိတ်နဲ့ ထပ်တူနီးပါးပါဘဲ…။ ပို့ စ်အတွက်လည်း ပိုပြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်…။
ထာဝရဘုရားကို ပူဇော်ပသတဲ့အခါ..သစ်သီးနဲ့ ပူဇော်တဲ့ သား နဲ့သိုးကိုသတ်ပြီး ပူဇော်တဲ့ ၂ယောက်အနက်…
“အသွေးအသားနဲ့ ပူဇော်တဲ့ သားကို ငါပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးတယ် ” ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းဟာ…
ကြီးမားတဲ့လမ်းကြောင်း၂ခု အဖြစ် ကွဲထွက်ခဲ့တယ်လို့ကျနော်မြင်ခဲ့ရတယ်..။
တစ်ခု သတိထားမိတာက ကျမ်းဟောင်းဘဲ…ကျနော့်စိတ်က လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်ခဲ့တယ်..ကိုရင်မောင်..
ကျမ်းသစ်မှာတော့ ဗုဒ္ဓတရားတော် ရဲ့ ၅ပါးသီလကို သွားတွေ့ ရတယ်..
ဒီလိုတွေဟောခဲ့တာကို ကြမ်းတမ်းသော ရှေး၇ိုးစွဲတွေက ကျမ်းဟောင်းနဲ့ မတူတဲ့အတွက်……
ယေရူခရစ်တော်…လက်ဝါးကားစင်ပေါ် တက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေထဲက တစ်ခုပါဘဲ…။
ကျနော် သူ့ ကို လေးစားတယ် ချစ်တယ် ဆိုတာ လူတွေ လိမ်မာဘို့ဟောကြားရင်း အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အတွက်လဲပါတယ်..။
လောက လူသားတွေ…ရက်စက်မှုက …..အံ့မခန်းပါဘဲ..
ကျမ်းဟောင်းကို လက်ခံဆဲဖြစ်တဲ့ လူတစ်ချို့ က ယေရှုကိုတောင် လက်မခံဘဲ ဟာသ လုပ်ပြောနေတာတွေ့ တော့ ကျနော်
အသားဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ဒေါသ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..
ဘယ်သူတွေ ဘာဘဲ ပြောပြောလေ…
ဟောဒီပို့ စ်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အားပေးဖတ်ရှုသူတွေ စိတ်ထဲမှာ ဘာသာမတူပေမယ့် ယေရှုခရစ်တော် အပေါ်မှာ
အဆိုးမမြင်ဘဲ သူတော်ကောင်းတစ်ယောက် သူတော်စင် တစ်ပါးအဖြစ် နားလည်ခံစားပေးနေတာကိုက…
မန်းဂေဇက်ရဲ့နှလုံးသား လို့ခံစားနားလည်မိတဲ့ ကျနော်…
ဒီပို့ စ်လေး ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်…ကိုရင်မောင်…။
ကိုခေါင် ရဲ့ ပိုစ့် လဲကောင်း ၊
အပြန်အလှန် ငြင်းခုံကြတဲ့ Comment တွေလဲ ကောင်းပါတယ် ။
” စိန့်.. သူတော်စင်တွေအဆင့်က… ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့.. အရိယာနဲ့တူမယ် ”
သူကြီး ဆိုလိုတဲ့သဘောက ဟိုဘက်တပ် ဒီဘက်တပ် ရဲ့ ၊
ရာထူး တူ ချင်း ညှိတဲ့ သဘောမျိုး ပြောသွားတာပါ ။
” မာမွတ်လျှာပွတ် နဲ့ ဖက်ပြိုင်ဖြစ်သူ နောင်ဂျီးကိုဗဲ အပြစ်တင်ဂျင်ဒေါ့သာဗဲ ”
တစ်ခုဘဲ ပြောချင်တာက ၊ ကို Aye Lwin Oo ရေ ။
ဦးကြောင် က သူကြီး Kai ကို အဲလိုဘဲ ၂ ပြားမတန်အောင် ပြောနေ နောက်နေကျဗျ ။
ဦးကြောင် ပြောတာ / နောက်တာ တွေကို အတည် မယူနှင့်ဗျ ။
ကျွန်မလည်း ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးဆြာခေါင့်လက်ရာ ယေရှုပုံတော်ကိုမြင်လိုက်ရတာစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စေတယ်။
အိမ်က သမီးနဲ့သားကို ကရင်မူကြိုမှာထားတော့ နေ့တိုင်းလိုလိုမောင်နှမနှစ်ယောက် သီချင်းဆိုတိုင်း ကိုယ်တော်ချင်းထပ်နေတယ်။
ဖေဖေက ငယ်တုန်း သူတို့ဆိုချင်ရာဆိုပါစေ။ကိုယ့်ဘာသာ သာမမေ့စေနဲ့ဆိုတာနဲ့လွှတ်ပေးထားလိုက်တယ်။သူများမိဘတွေကတော့ အဲလိုသီချင်းတွေပါထည့်သင်လို့ဆိုပြီး ဘာသာရေးမာနကြောင့် စိတ်၇ှည်သီးခံပြီး သေသေချာချာသင်ကြားပို့ချတဲ့ကရင်မူကြိုမှာ မထားပဲ။စိတ်မရှည် ညည်းညူတဲ့မြန်မာမူကြိုတွေမှာထားကြတယ်။
အကျိုး (ကောင်းကျိုး) ကို ရှေ့တန်းတင်စဉ်းစားလေ့ရှိသမို့
ဘာသာကြီးလေးရပ်လုံးထဲက လူတွေကို ကောင်းကျိုးရှိစေတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာ လေးစားပါတယ်။
လူတွေကို ကောင်းကျိုးမရှိစေတဲ့ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေရှိခဲ့ရင်
ဘာသာတရားကသာ လူသားအကျိုးအတွက် ဖြစ်စေသင့်တယ်…။
(ဂွစကားတော့ ပြောမိပြီ ။ ရွာထဲဝင်ဝင်ချင်း အဆဲခံရတော့မှာပဲ။ )